एमाले उदयपुर अध्यक्षमा तिन नेताले छाडेनन् दावी, कस्ले मार्ला बाजी ? - पूर्णपुष्टि
एमाले उदयपुर अध्यक्षमा तिन नेताले छाडेनन् दावी, कस्ले मार्ला बाजी ?
एमाले उदयपुर अध्यक्षको लागि ३ जनाले आप्नो अध्याक्ष पदको दावी कायमै राखेको जनाएको छ । एमाले उदयपुरको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको क्रममा नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया अन्र्तरगत आज समम पनि सर्वसहमताा आउन नसकेपछि तिनै जनाले आफ्नो दावी कायमै रहेको जनाएको छ ।
उनिहरुले पार्टीमा आफ्नै योगदान र कदरको कुरालाई जोडेर पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो भुमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै आफ्नो दावीलाई निरन्तर कायम राखेको जनाए । एमाले नेता तथा जिल्ला सचिव परमेश्वर घिमिरेले एमाले पार्टी जिल्ला अध्यक्षमा आफ्नो पहिलो हक लाग्ने जनाएको छ । एमाले पार्टीको तर्फ बाट जनताहरुलाई धेरै साथ सहयोग गरेको भन्दै अध्यक्षमा आफ्नो दावी पहिलो हक लाग्ने जानकारी दिए ।
समन्वय प्रमुख समेत रहेको खड्ग परियारले पनि आफु पार्टी हाँक्न सक्षमा र योग्य भएको जनाए । परियारले पार्टीलाई क्रियाशिल र मजवुद बनाउने कुरामा आफु सँधै अग्रसरको रुपमा भुमिका खेलेर यहाँ सम्म आएको भन्दै पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो पहिलो भुमिका रहने समेत जनाए । यस्तै एमाले नेता कालु लामाले पनि आठौँ माहाधिवेशन पहिलो प्राथामिकताको अध्यक्ष आफु नै रहेको जनाए ।
लामाले लामो समय देखी पार्टीलाई असहज बातावरणमा पनि सहजताको माध्यमबाट सहयोग पुराएको भन्दै अध्यक्षको दावी र हिंसा लाग्ने बताए । लामाले अध्यक्ष मण्डललाई आफ्नो नाम सर्वसहमत प्रकाशन गर्न समेत अनुरोध गरेको जनाए ।
Prevउदयपुरको रौतामाईमा किशोरकिशोरीद्धारा बालविवाह न्युनिकरणका लागि सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए
Next७ वर्षीया बालिका करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ